Mifindra any Floride ny Mpandika Teny ASL (Tenin’ny Tanana Amerikanina)
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Kikaonde Kinyarwanda Kirundi Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tiorka Tseky Xhosa Zoloa Éwé
Nasiana Biraon’ny Fandikan-teny ho An’ny Tenin’ny Tanana Amerikanina any Floride
FORT LAUDERDALE, any Floride—Tany amin’ny Foibem-pampianaran’ny Tilikambo Fiambenana any Patterson, any New York, no nisy ny mpandika teny amin’ny tenin’ny tanana amerikanina (ASL) taloha. Nanomboka nafindran’ny Vavolombelon’i Jehovah tany Fort Lauderdale, any Floride, anefa izy ireo tamin’ny 14 Novambra 2014. Tany Patterson foana no nandikana ny Baiboly sy boky ara-baibolin’ny Vavolombelon’i Jehovah ho amin’ny ASL, nanomboka tamin’ny 1995. Nohavaozin’ny Vavolombelona ilay trano tany Fort Lauderdale, tao anatin’ny volana vitsivitsy, mba hanaovana birao sy toerana fakana video. Efa azo ampiasaina tsara ilay biraon’ny fandikan-teny ho an’ny ASL, ny volana Mey 2015.
Ataon’ny Vavolombelon’i Jehovah amin’ny DVD ireo video ASL ary apetrany ao amin’ny jw.org. Fiangonana 500 mahery maneran-tany no mampiasa an’ireny DVD ireny mandritra ny fivoriana ataony isan-kerinandro. Ampiasaina koa izy ireny mandritra ny fivoriamben’ny faritra indroa sy fivoriamben’ny vondrom-paritra indray mandeha isan-taona.
Hoy i Jonathan Galvez, mpandrindra ny Vavolombelona mpandika teny amin’ny ASL any Floride: “Tianay ho mora azon’ny ankamaroan’ny olona mampiasa ASL ny videonay, na avy aiza izy na avy aiza, na inona na inona fianarana vitany.” Hoy ihany izy: “Ampiasaina any amin’ny tany 45 eo ho eo ny ASL. Toy ny fitenin’ny mandre ihany, dia miova kely koa ny tenin’ny tanana ampiasain’ny marenina, arakaraka ny faritra misy azy. Afaka mifanerasera amin’ny olona maro kokoa mampiasa ASL izao ny mpandika teninay rehefa nafindra teto Fort Lauderdale. Isan-karazany sy avy any amin’ny firenena samihafa mantsy ny olona mampiasa ASL atỳ.”
Manao fikarohana momba ny marenina sy ny tenin’ny tanana i Frank Bechter, manam-pahaizana momba ny fiaraha-monina sy ny fiteny. Nanatrika fivoriamben’ny Vavolombelon’i Jehovah tamin’ny teny ASL tany Richmond, any Virginie, àry izy, tamin’ny 2014. Hoy izy: “Hitako tamin’ilay tany Richmond iny hoe miezaka be ianareo mba hazava tsara ny ASL ampiasainareo sy ny zavatra adikanareo. Nampiasainareo matetika ireo andinin-teny ao amin’ny Baiboly efa voaomana tsara sy nalaina video mialoha. Tiako be ny fomba ampiasanareo ny ASL.” Hoy ihany izy: “Tena mahafinaritra ahy ny mahita ny Vavolombelon’i Jehovah miezaka mandika tsara ny Baiboly ho amin’ny ASL. Tena ilaina mantsy ny Baiboly eo amin’ny fiaraha-monina, ary nandray anjara be teo amin’ny tantaran’ny olombelona izy io. Amiko, dia tokony ho afaka hahazo an’izay boky nanova an’izao tontolo izao koa ny marenina, hoatran’ny olon-kafa ihany.”
Video be dia be amin’ny fiteny 80 eo ho eo amin’ny tenin’ny tanana no efa navoakan’ny ekipan’ny mpandika tenin’ny Vavolombelon’i Jehovah maneran-tany. Zarain’izy ireo maimaim-poana izy ireny. Namoaka ny JW Library Sign Language koa ny Vavolombelon’i Jehovah. Programa ahafahana maka sy mandahatra ary mijery video amin’ny tenin’ny tanana ao amin’ny jw.org izy io.
Misy Amin’ny Tenin’ny Tanana Amerikanina Izao ny Genesisy